I-Condo yonke, ikwiNdawo esembindini, izolile
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguDevica
Yonwabela ukufikelela ngokulula kuyo yonke into ukusuka kule ndawo ibekwe ngokugqibeleleyo ye-2nd (phezulu) yebali condo! I-Beachy cottage-style condo, kwindawo ezolileyo esekwe kakuhle, inezitrato ezilungele ukuhamba okanye ukubaleka! Indawo esembindini, kodwa izolile ngokumangalisayo njengoko ifakwe kwindawo enemithi, indlela enkulu ejikela ngaphandle kobunzima kukudutyulwa okuthe ngqo kumbindi wesixeko. Inebalcony yabucala ejongela nto ngaphandle kwemithi macala onke!
Nge-800 sf kuwe, uya kuba nayo yonke indawo kubandakanya igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, indawo yokuhlala, ikhitshi eligcweleyo / igumbi lokutyela, kunye nebalcony. Ibekwe kwindawo esembindini naphi na eGreenville, kodwa izolile kwaye izolile.
Izinto eziluncedo ziquka ibhedi epheleleyo; umatrasi kunye nemithwalo egqunywe ngezigqubuthelo zokungangeni manzi ngenxa yempilo yakho kunye nokhuseleko; igunjana/ishelufu yezinto zakho; indawo yokusebenzela enesibane setafile; iindawo zokufikelela lula; ibhafu epheleleyo kunye ne-tub / ishawa combo; ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, apho uyakuhlala ufumana ikofu, iti, amanzi asebhotileni, kunye nokutya okusempilweni!
Umbuki zindwendwe ngu- Devica
Siyimizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yakho, ngoko siyafumaneka ukuba uyasifuna!